ဆရာဝန် များ နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အိမ်မပြန်ဘဲ COVID-19 ကုသစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် အခန်း ၃၀၀ခန့်နှင့် မနက်စာ/ နေ့လယ်စာ / ညစာ လှူဒါန်းနိုင်သူများ အမြန်ဆက်သွယ်ပေးပါ - Yangon Nation News
ဆရာဝန် များ နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အိမ်မပြန်ဘဲ COVID-19 ကုသစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် အခန်း ၃၀၀ခန့်နှင့် မနက်စာ/ နေ့လယ်စာ / ညစာ လှူဒါန်းနိုင်သူများ အမြန်ဆက်သွယ်ပေးပါ
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆေးရုံကြီးများ အသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်သော ဆရာဝန် များ နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အိမ်မပြန်ဘဲ COVID-19 ကုသစောင့်ရှောက်မူလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် MOHS မှ အခန်းများ ( ၃၀၀) ခန်း. ၊လူ (၄၀၀) စာ ခန့် အရေးတကြီးအမြန်လိုအပ်နေပါရျ် ကူညီပေးနိုင်သော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင် များ နှင့် အိမ်ပိုင်ရှင် များ .
မနက်စာ/ နေ့လယ်စာ / ညစာ လျှုဒါန်းပေးနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ .စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များ အောက်ပါအတိုင်း အမြန်ဆက်သွယ်ပေးပါရန် ( ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ) လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ခင်ဗျား …..
#COVID တိုက်ပွဲဝင်ဆရာဝန်များအတွက်ခေတ္တတည်းခိုရန်(Quarantine ပြုလုပ်ရန်)အိမ်များလိုအပ်
#ရန်ကုန်မြို့နှင့်အောက်မြန်မာပြည်မှ Covid လူနာများအတွက် အသက်အန္တရယ်ဇုန်ထဲတွင်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်နေရသောဖောင်ကြီး/အင်းစိန်/ဝေဘာဂီ/မြောက်ဥက္ကလာ/တောင်ဥက္ကလာ/ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှာ #ဆေးရုံတာဝန်ပြီးဆုံးလျှင် 12 to4ညမထွက်ရအမိန့်နှင့်တာဝန်ပြီးဆုံးရင်လည်း မိသားစုဖြင့်နေထိုင်ရန်အဆင်မပြေခြင်းများကြောင့်လတ်တလောနေရေးထိုင်ရေးအတွက်၊ လူ ၁၀ ဦးမှသည် ၅၀ ဦးလောက်အထိနေနိုင်သော လုံးခြင်းအိမ်နှင့် အခန်းကျယ်များအမြန်လိုအပ်နေပါ​သည်ခင်ဗျာ။
#လှူဒါန်းလိုသောအိမ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် အထက်ဖေါ်ပြပါဆေးရုံကြီးများနှင့် မနီး မဝေးနေရာများကိုဦးစားပေးစဥ်းစားစေလိုပါသည်။
Camp ရဲ့ Capcity အနေဖြင့် လူ ၂၀/ ၃၀ မှသည် ၅၀ အထိမျှော်မှန်းပါသည်။ Covid ကာလဘယ်လောက်ကြာမယ်မှန်းမရသည့်အတွက်အလှူရှင်များအနေဖြင့် နေအိမ်အပါအဝင် အခြား မနက်စာ/ညစာများလည်းမိမိတို့တတ်စွမ်းသ၍ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒေါက်တာဇော်လင်းသိန် ဖုံး 09 250081953/
ဦးခိုင်ထွေး 09 5107990/
ဦးသန်းဌေးအောင် 09 5154629
ဦးခင်အောင်ထွန်း 09 5000164
Credit – Khin Aung Htun
အသက် (၇၅) နှစ် အမျိုးသား (Case-2523) နှင့် အသက် (၉၀) နှစ် အမျိုးသမီး (Case-2260) တို့ထပ်မံ​ေသဆုံး